Isekethe yesekethe ekhusela amandla e-Eaton yongeza ukusebenza kubathengi beC & I
Isekethe yesekethe ekrelekrele ye-Eaton (ekwabizwa ngokuba sisaphuli sesekethe yolawulo lwamandla) yabasebenzisi beendawo zokuhlala yaboniswa ngokugqamileyo kulo Mboniso waMandla oMbane weSolar. U-Sonnen ubonakalise i-Eaton's breaker smart breaker ngokufaka ngamandla. Isixhobo sabonisa amandla ec ...
Le mimoya phantsi kwe-radar iya kwandisa uluhlu lwe-UPS
I-Motley Fool yasekwa ngo-1993 ngabazalwana uTom no David Gardner. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, iipodcast, iincwadi, iikholamu zamaphephandaba, iinkqubo zikanomathotholo kunye neenkonzo zotyalo-mali oluphambili, sinceda izigidi zabantu ukuba zifumane inkululeko yezemali. Inkonzo yeParcel United (i-NYSE: i-UPS) ibinenye ikota ebalaseleyo, ...
ngomphathi ku 20-09-28
Okwangoku, ukusetyenziswa kobuchwephesha bebhetri ye-lithium kugcino lwamandla ikakhulu kugxile kumabala esiseko sesikhululo samandla ombane, inkqubo yokugcina ekhaya ebonakalayo, izithuthi zombane kunye nezikhululo zokutshaja, izixhobo zombane, izixhobo zeofisi yasekhaya kunye nezinye iinkalo. Ngexesha le-13 lesihlanu Ewe ...
indibaniselwano entsha kunye nokuxhotyiswa kwetekhnoloji yedijithali
Okwangoku, inguqu yedijithali iye yaba yimvumelwano yamashishini, kodwa ejongene netekhnoloji engapheliyo yedijithali, indlela yokwenza itekhnoloji idlale eyona nzuzo inkulu kwishishini lishishini liyimpazamo kunye nomceli mngeni ojamelene namashishini amaninzi. Ngokumalunga noku, ngexesha ...
Iindaba zeCCTV zidwelise imfumba yokutshaja njengenye yeendawo ezisixhenxe eziphambili zokwakha iziseko zophuhliso.
ngomphathi ku 20-09-25
Isishwankathelo: ngoFebruwari 28, 2020, inqaku elithi "lixesha lokuqala umjikelo omtsha wolwakhiwo lwezibonelelo" ekhutshwe, nebangele ingqwalaselo ebanzi kunye nengxoxo "ngezixhobo ezitsha" kwintengiso. Emva koko, iindaba zeCCTV zidwelise imfumba yokutshaja njengaku ...
I-2020 ye-Middle East yamandla eDubai
Ixesha lexesha: 2020-06-27
IYUANKY yenye yezona zinto ziphambili zombane ezingama-500 ehlabathini
Ikhaya> Iindaba IYUANKY yenye yezinto eziphambili zombane ezingama-500 kwihlabathi ngexesha: 2019-11-27 Iifonti: I-BigMediumSmall YUANKY yenye yezona zinto ziphambili zombane ezingama-500 ehlabathini. Kwaye specialising in OEM & ODM beesekethe breakers iminyaka engaphezu kwama-20.